Diabetes (ဆီးချိုရောဂါ) - Hello Sayarwon
အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို
Dr. Sandar Lin မှ ရေးသားသည်။ 19/02/2018 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Diabetes (ဆီးချိုရောဂါ) ကဘာလဲ။
ခန္ဓါကိုယ်၏ခုခံအားမှပန်ကလိယခေါ်မုန့်ချိုအိတ်ရှိ အင်အူလင်ထုတ်သော ဆဲလ်များကိုတိုခိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာသည်။
မုန့်ချိုအိတ်မှ အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးပြီး ခန္ဓါကိုယ်ရှိဆဲလ်များအပေါ်တွင်လည်း ထိုအင်ဆူလင်သက်ရောက်မှုအားနည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ သွေးထဲသကြားဓါတ်မြင့်မားခြင်းကြောင့် မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊ရေဆာခြင်း၊ဆာလောင်ခြင်းတို့ ခံစားရတတ်သည်။
Diabetes (ဆီးချိုရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဆီးချိုရောဂါဟာ အခုအခါမှာအဖြစ်များလာကြပြီး ဆီးချိုကိုပိုမိုဖြစ်စေနိုင်သောအချက်များကိုကြိုတင်ကာကွယ်သောအားဖြင့် ရှောင်ရှားသင့်ပေသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နီးစပ်ရာဆရာဝန်နင့်တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည်။
Diabetes (ဆီးချိုရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အမျိုးအစား ၂ဆီးချိုရောဂါသည်များတွင် လက္ခဏာမှာမသိသာတတ်ပေ။
ချိုင်းကြားကဲ့သို့ချွေးအောင်းနိုင်သော ကြားနေရာများတွင် ယားခြင်း၊အနာဖြစ်ခြင်း
ထိုလက္ခဏာများသည်အမျိုးအစား ၁တွင် ရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
အမျိုးအစား ၂ တွင်မူလက္ခဏာမှာမသိသာ၍ သတိထားမိဖို့ရာ အချိန်ကြာတတ်သည်။
Diabetes (ဆီးချိုရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
စားလိုက်သောအစားများထဲမှသကြားဓါတ်ကိုအစာအိမ်မှချေဖျက်စုပ်ယူပြီးနောက် ဆဲလ်များတွင်စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသိုလှောင်ရန် အင်ဆူလင် လိုအပ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါသည်များတွင် ထိုအင်ဆူလင်မရြိှခ်းကြောင့် စွမ်းအင်အဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ဘဲ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်မြင့်တက်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အမျိုးအစား ၁ ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချ၍မရနိုင်ပေမယ့် အမျိုးအစား ၂ ကတော့အဝလွန်သူများတွင်အဖြစ်များသည်။
Diabetes (ဆီးချိုရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသက် ၄၀ ကျော်လာလျှင်ဆီးချိုရောဂါပိုဖြစ်လာနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝလွန်းသူများ၊ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ဆီးချိုမျိုးရိုးရှိသူများပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
Diabetes (ဆီးချိုရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Diabetes (ဆီးချိုရောဂါဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁များဟာသွေးထဲမှာ အင်ဆူလင်ဟိုမုန်းမရှိခြင်းကြောင့်ထိုဟိုမုန်းဆေးကို အစားစားခါနီးတိုင်း ပုံမှန်ထိုးပေးရန်လိုအပ်သည်။
Diabetes: Symptoms, Causes and Treatments.
http://www.medicalnewstoday.com/info/diabetes. Accessed 02 September, 2016.
http://www.nhs.uk/Conditions/Diabetes/Pages/Diabetes.aspx. Accessed 02 September, 2016.
Diabetes Health Center.
http://www.webmd.com/diabetes/guide/understanding-diabetes-symptoms?page=2. Accessed 02 September, 2016.
http://www.yourdiseaserisk.wustl.edu/YDRDefault.aspx?ScreenControl=YDRGeneral&ScreenName=YDRDiabetesFact_Sheet#q2. Accessed 02 September, 2016.
http://www.diabetes.org/diabetes-basics/symptoms/?referrer=https://www.google.com.vn/.Accessed 02 September, 2016.
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ နှလုံးရောဂါ မဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ
ဆီးချိုရောဂါ အကြိုလက္ခဏာ ခံစားနေရသူတွေမှာ ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်နိုင်ခြေ ပိုများ